कुन महिनामा जन्मिएका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? – Nepal Insider
सावधान ! घर बनाउँने फलामे डण्डी यो कम्पनीले यतिसम्म गुणस्तरहीन बनाउँने गरेको खुलासा
यी हुन तीन महिनाको रु एक लाख ३५ हजार घरभाडा छुट दिने घरबेटी
अब लकडाउन नगर्ने मनस्थितिमा सरकार, बरू स्वयंसेवक खटाउने
अनशनरत यी महान डा. केसी भो’कभो’कै बि’रामी जाँच्दै, [उहाँको सम्मान स्वरुप एक शेयर गरौँ]
काठमाडौं छोड्नेहरुका लागि लागु भयो यस्तो नयाँ नियम, सुचनासहित [ सबैलाई सक्दो शेयर गरौँ ]
यी हुन को’रोनावि’रुद्धको खोप लिने पहिलो भाग्यमानी नेपाली [ बधाई स्वरुप एक शेयर गरौँ ]
निजी विद्यालयमा विद्यार्थी अलमल्याउँदै, शुल्क असुल्दै !
आयो अत्यन्तै दुखद खबर : खाल्डोमा डुबेर पाँच बषिय बालकको मृत्यु, दुई बालकको अवस्था गम्भिर
नेपाली जनताले रेल आएको खुसि साट्न नपाउदै नेपालमा आएको रेल पुनः भारततर्फ नै फिर्ता लगियो
काफल डाँडास्थित तीन धारा झर्नामा आन्तरिक पर्यटकको आवागमन बढ्दै
मुख्य पृष्ठ /रोचक/कुन महिनामा जन्मिएका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ?
तर उनीहरुको स्वभाव जन्मेको महिना अनुसार पनि निर्धारण हुने ज्योतिषीय तथ्य पनि फेला परेको छ कुन महिना जन्मेका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने केहि कुराको बारेमा पत्ता लागेको केहि तथ्यहरु स्
बैसाख: यो महिनामा जन्मिएका महिला प्राय धनवान, राम्रो चित्त र बिचार भएका,कम खर्च गर्ने, क्रोधवान, सुन्दर आँखा भएका हुन्छन । उनीहरूको जीवनमा धन र सुख प्रशस्त प्राप्त गर्ने बताइन्छ ।
जेठ: जेठ महिनामा जन्मिएका महिलाहरु प्राय विदेशमा बस्ने, शुभ चित्त र लामो आयु भएका हुन्छन् । उनीहरूको जीवनमा सुख र धन सहजै प्राप्त हुन्छ । यो महिनामा जन्मिने महिलाहरु विशेषगरी नया ठाउँहरु घुम्न मनपराउने हुन्छन ।
असार: असारमा जन्मिएका महिलाहरूको प्राय नरम र मीठो बोली बोल्छन् । उनीहरूको आवाजमा मधुरता हुन्छ । उनीहरूका श्रीमानको स्वभाव पनि राम्रो हुन्छ । कडा मेहनत र संघर्षमा पनि उनीहरूले सोँचे जस्तो सुख र धन प्राप्त नहुन सक्छ ।
साउन: साउन महिनामा जन्मिएका महिलाहरुले प्राय राम्रो र धार्मिक काममा बढी मन लगाउँछन् । विशेषगरी यो महिनामा जन्मिएका नारीहरु सहयोगी भावनाका हुन्छन । उनीहरूको जीवनमा समान रुपमा सुख, दुःख, फाइदा र नोक्सान हुने देखिन्छ ।
भाद्र: यो महिनामा जन्म लिएका महिलाहरूको मिठो बोली र सरल स्वभाव उनीहरूको विशेषता हो । उनीहरूलाई श्रीमानबाट पनि अत्यन्तै सुख र प्रेम मिल्छ । घरपरिवार सासु ससुराबाट माया र सम्मान प्राप्त गर्छन् । यो महिनामा जन्मिएका महिलाहरु प्राय धेरै बोल्ने स्वभावका हुन्छन ।
असोज: असोज महिनामा जन्मिएका नारीहरु प्राय चञ्चल स्वभावका हुने गर्छन । उनीहरू कसैसँग कुरा गर्दा पनि सर्तकता अपनाउँछन् । यो महिनामा जन्मिएका नारीहरु अत्यन्त पवित्र र गुणवान हुने गर्छन ।
कार्तिक: यो महिनामा जन्मिएका महिलाहरु निकै बुद्धिमानी हुन्छन् ।मिठो बोल्छन् । सामान्यतय यी महिलाहरूले आफ्ना श्रीमानलाई आफ्नो अधिनमा राख्न चाहन्छन् । यो महिनामा जन्मिएका महिलाहरु अलिकति बढी रिसाउने स्वभावका पनि हुन्छन ।
मंसीर: यो महिनामा जन्मिएका माहिलााहरु मिठो बचन बोल्ने, धनवान, धर्ममा विश्वास राख्ने, निकै मिलनसार, झुटो कुरा गरेको मन नपराउने र अरुलाई उपकार गर्ने प्रकारका हुन्छन् ।
पुष: पुष महिनामा जन्मिने महिलाहरू आफ्नै कामबाट भाग्य निर्माण गर्ने खुबी राख्छन् । सबैसँग मिलजुल गर्ने स्वभावका कारण समाजमा मान सम्मान पाउँछन् । यो महिनामा जन्मिने महिलाहरु निडर र सामान्यतय अत्यन्तै क्रोधी स्वभावका पनि हुने गर्छन ।
माघ: माघमा जन्मिएका महिलाहरू सुन्दर अनुहारका हुन्छन् । सरल र सहज स्वभावका हुन्छन् तर अलि जिद्दी स्वभाव र अरुलाई कुरा गर्दा पुरा कुरा गर्न नदिने स्वभावका हुन्छन् । यो महिनामा जन्मिएका महिलाहरु निकै बुद्धिमानी र चञ्चल स्वभावका पनि हुने गर्छन ।
फागुन: यो महिनामा जन्मिने महिलाहरु शुक्ल वर्ण भएको, अरुको उपकार गर्ने, धनवान, विद्यावान, सुखी र सधैँ विदेश भ्रमण गर्ने खालका हुन्छन् । उनीहरू कसैको पनि दुःख देख्न सक्दैनन् ।
चैत: यो महिनामा जन्मिएका महिला निकै चलाख र चतुर हुन्छन् । सुन्दर हुनुका साथै चञ्चल स्वभावका कारण अरुलाई छिटो आकर्षण गर्छन् । धनबाट पनि उनीहरू लाभान्वित हुन्छन् । प्राय यो महिनामा जन्मिएका महिलाहरु राम्रो कर्म गर्ने रुचाउने स्वभावका हुन्छन ।कहिलेकाहिँ उनीहरूमा क्रोध हावी हुनाले समस्या पनि ल्याएको हुन्छ ।
नाङ्गै रहेका जलपरीको स्तन छोपिएपछि…
यी महिलाले बच्चालाइ जन्म दिएपछि, पेटबाट निस्केको अर्को चिजले डाक्टर अ *चम्म परे ! देश भरिनै भयो खैलाबैला
भोली बर्षकै अति पवित्र दिन महा शिवरात्रि, बिहानै यी कार्य गरे जे अपुग छ त्यही प्राप्ती